တော့တင်ဟမ်ကို လီဗာပူးအသင်း အနိုင်ကစား ခဲ့ပြီးနောက် အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ ယာဂန်ကလော့ ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတာကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ မိုဟာမက်ဆာလား - SPORTS MYANMAR
တော့တင်ဟမ်ကို လီဗာပူးအသင်း အနိုင်ကစား ခဲ့ပြီးနောက် အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ ယာဂန်ကလော့ ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတာကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ မိုဟာမက်ဆာလား
By Edi Tor March 31, 2019
ယာဂန်ကလော့က ကစားပုံ ကောင်းမွန်ခြင်းထက် တော့တင်ဟမ်ကို အနိုင်ရတာက ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်လို့ သူ့ရဲ့ လီဗာပူး ကစားသမားတွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူး အသင်းဟာ မန်စီးတီးကို ကျော်ကာ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ကို ပြန်လည် တက်လှမ်း နိုင်ဖို့ အတွက် တိုဘီအယ်ဒါဝီရယ် ရဲ့ own goal နဲ့ ကံတရားရဲ့ ဖေးမမှု လိုအပ် ခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူး အသင်းဟာ ပထမပိုင်းမှာ တော့တင်ဟမ်ကို ခြေစွမ်းအသာ နဲ့ကစားကာ ဦးဆောင်ဂိုးပါ သွင်းယူ ထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒုတိယပိုင်း မှာတော့ တော့တင်ဟမ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု အောက်မှာ ရုန်းကန် ခဲ့ရပြီး ချေပဂိုး ပြန်ပေး ခဲ့ရတဲ့ အပြင် ပွဲဟာ သရေဘက်ကို ဦးတည် နေခဲ့ ပေမယ့်လည်း ဆာလားရဲ့ ပွဲပြီးခါနီး ခေါင်းတိုက်ချက်ကို လိုရစ်ပုတ်ထုတ်ရာမှာ အယ်ဒါဝီရယ်ဟာ ဘောလုံး လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိနေခဲ့ပြီး ဘောလုံးဟာ ၎င်းနဲ့ ပြန်ထိကာ ဂိုးထဲကို ၀င်သွား ခဲ့တာကြောင့် လီဗာပူးဟာ နောက်ကျ အနိုင်ဂိုးနဲ့ အတူ အဖိုးတန် ၃ မှတ် ပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အီဂျစ် တိုက်စစ်မှုး ဆာလား က လီဗာပူး အသင်းရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် မျှော်လင့်ချက် ဆက်လက် ရှင်သန် နိုင်ခဲ့တဲ့ စပါးကို နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲအပြီးမှာ ကလော့ဟာ သူ့ကစားသမားတွေကို ဘာပြောခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ထုတ်ဖော် သွားခဲ့ ပါတယ်။
ဆာလား က “ပွဲပြီးဆုံး ပြီးနောက် ကျွန်တော် အ၀တ်လဲခန်း ထဲကို ၀င်သွား ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် မန်နေဂျာ နဲ့ စကား ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူပြောတာကတော့ အကောင်းဆုံး ကစားနိုင်ဖို့ဟာ အရေးကြီးဆုံး မဟုတ်ဘဲ ၇မှတ်တွေ ရှာဖွေ နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ရှာတွေ့ဖို့ကသာ အရေးကြီးဆုံး အရာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုပါ။
အသင်းကြီးတွေဟာ အမြဲတမ်း ရမှတ်တွေ ရယူ နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို အမြဲ ရှာဖွေ နိုင်ကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံး မကစား နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အနိုင် ရခဲ့ပြီး ဒါဟာ အရေးကြီးဆုံး အရာပါ။ ဒါဟာ အသင်းကြီး တစ်သင်းရဲ့ လက္ခဏာ ပါပဲ။
ဒီနေ့မှာ ပရိတ်သတ် ရဲ့ အားပေးမှုဟာ ရူးလောက်စရာပါ။ သူတို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို လိုချင်နေကြပြီး ဒီလို ဖြစ်လာဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ အစွမ်းကုန် လုပ်နေ ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အားပေးမှုဟာ ပွဲအတွင်းမှာ အများကြီး အကူအညီ ဖြစ်စေပါတယ်။ အရာအားလုံးကို ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အတူ ပြောင်းလဲလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ပရိတ်သတ် တွေဟာ ဒီဂိုးကို ကျွန်တော့်ကို ဒီဂိုး ပေးခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဂိုးမဟုတ်လည်း သိပ်ပြီးတော့ အရေး မပါပါဘူး။ ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်ပါဘူး။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ အနိုင် ၃ မှတ် ရဖို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲတွေ ဂိုးမသွင်း နိုင်ခဲ့ ပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့်လို သွင်းဂိုး ပမာဏ ကို သွင်းယူ နိုင်တဲ့ အခြား ကစားသမားတွေ ရှိနေပါတယ်။ အိုကေပါ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အသင်း အတွက်ပဲ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ရအောင် ကစားပေးချင် ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော့် အတွက် အရေးကြီးဆုံး အရာ ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ပွဲအပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ က​လော့က “ပွဲအပြီးမှာ ကျွန်​​တော် ​ကောင်​​လေး​တွေကို ​ပြောခဲ့ပါတယ်​။ ​ဘောလုံးပွဲ တစ်​ပွဲကို အနိုင်​ရရှိဖို့်​အတွက်​ နည်းလမ်း ၅၀၀ ​လောက်​ ရှိတယ်​ လို့ပါ။ ဒီ​နေ့ဟာ အနည်းငယ် ရုပ်​ဆိုး နိုင်​ပါတယ်​။
လီဗာပူး အသင်းဟာ လာမည့် ပွဲစဉ်မှာတော့ ဆောက်သမ်တန်ကို အဝေးကွင်းမှာ သွားကစား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးတီး ကတော့ ကြားရက်မှာ ကာဒစ်နဲ့ ကစား ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဆာလား ကတော့ သူတို့ရဲ့ နိုင်ပွဲ အရှိန်အဟုန် ဆက်လက် တည်ရှိနေရမယ်လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။ ​နောက်​ဆုံး မှာ ဘယ်​သူ ဂရုစိုက်​​ လို့လဲ ? ဒါဟာ အ​ခြေအ​နေပါ။” လို့ ​ပြောသွားပါတယ်​။
“အခုဆိုရင် ပွဲတိုင်းဟာ ပိုမို ခက်ခဲ လာသလို ပိုပြီးလည်း ဖိအား များလာပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖလားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိနေအောင် လုပ်သွားရမှာ ဖြစ်ပြီး နိုင်ပွဲတွေ ရဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ ဆောက်သမ်တန် ဟာ အမှတ်တွေ လိုနေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ဆက်နေချင်တာကြောင့် အသက်ပေးပြီး တိုက်ပွဲဝင် သွားမှာ သေချာပါတ်ယ။ ကျွန်တော်တို့ ကတော့ ပွဲတိုင်းကို အနိုင် ကစား ရပါမယ်။” လို့ ဆာလား က ပြောခဲ့ ပါတယ်။
တော့တငျဟမျကို လီဗာပူးအသငျး အနိုငျကစား ခဲ့ပွီးနောကျ အဝတျလဲခနျးထဲမှာ ယာဂနျကလော့ ဘာပွောခဲ့သလဲဆိုတာကို ထုတျဖျောလိုကျတဲ့ မိုဟာမကျဆာလား
ယာဂနျကလော့က ကစားပုံ ကောငျးမှနျခွငျးထကျ တော့တငျဟမျကို အနျိုငျရတာက ပိုပွီး အရေးကွီးတယျလို့ သူ့ရဲ့ လီဗာပူး ကစားသမားတှကေို ပွောခဲ့ပါတယျ။ လီဗာပူး အသငျးဟာ မနျစီးတီးကို ကြျောကာ ပရီးမီးယားလိဂျ အမှတျပေးဇယား ထိပျကို ပွနျလညျ တကျလှမျး နျိုငျဖို့ အတှကျ တိုဘီအယျဒါဝီရယျ ရဲ့ own goal နဲ့ ကံတရားရဲ့ ဖေးမမှု လိုအပျ ခဲ့ပါတယျ။
လီဗာပူး အသငျးဟာ ပထမပိုငျးမှာ တော့တငျဟမျကို ခွစှေမျးအသာ နဲ့ကစားကာ ဦးဆောငျဂိုးပါ သှငျးယူ ထားနိုငျခဲ့ပမေယျ့လညျး ဒုတိယပိုငျး မှာတော့ တော့တငျဟမျရဲ့ လှမျးမိုးမှု အောကျမှာ ရုနျးကနျ ခဲ့ရပွီး ခပြေဂိုး ပွနျပေး ခဲ့ရတဲ့ အပွငျ ပှဲဟာ သရဘေကျကို ဦးတညျ နခေဲ့ ပမေယျ့လညျး ဆာလားရဲ့ ပှဲပွီးခါနီး ခေါငျးတိုကျခကျြကို လိုရဈပုတျထုတျရာမှာ အယျဒါဝီရယျဟာ ဘောလုံး လမျးကွောငျးပျေါမှာ ရှိနခေဲ့ပွီး ဘောလုံးဟာ ၎င်းငျးနဲ့ ပွနျထိကာ ဂိုးထဲကို ၀ငျသှား ခဲ့တာကွောငျ့ လီဗာပူးဟာ နောကျကြ အနိုငျဂိုးနဲ့ အတူ အဖိုးတနျ ၃ မှတျ ပိုငျဆိုငျ နိုငျခဲ့ပါတယျ။
အီဂဈြ တိုကျစဈမှုး ဆာလား က လီဗာပူး အသငျးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ မြှျောလငျ့ခကျြ ဆကျလကျ ရှငျသနျ နျိုငျခဲ့တဲ့ စပါးကို နျိုငျခဲ့တဲ့ ပှဲအပွီးမှာ ကလော့ဟာ သူ့ကစားသမားတှကေို ဘာပွောခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ထုတျဖျော သှားခဲ့ ပါတယျ။
ဆာလား က “ပှဲပွီးဆုံး ပွီးနောကျ ကြှနျတျော အဝတျလဲခနျး ထဲကို ၀ငျသှား ခဲ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျတျော မနျနဂြော နဲ့ စကား ပွောဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သူပွောတာကတော့ အကောငျးဆုံး ကစားနိုငျဖို့ဟာ အရေးကွီးဆုံး မဟုတျဘဲ ရမှတျတှေ ရှာဖှေ နျိုငျမယျ့ နညျးလမျးကို ရှာတှဖေို့ကသာ အရေးကွီးဆုံး အရာ ဖွဈတယျ ဆိုတာကိုပါ။
အသငျးကွီးတှဟော အမွဲတမျး ရမှတျတှေ ရယူ နိုငျမယျ့ နညျးလမျးကို အမွဲ ရှာဖှေ နိုငျကွပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာ ကြှနျတျောတို့ အကောငျးဆုံး မကစား နိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ အနိုငျ ရခဲ့ပွီး ဒါဟာ အရေးကွီးဆုံး အရာပါ။ ဒါဟာ အသငျးကွီး တဈသငျးရဲ့ လက်ခဏာ ပါပဲ။
ဒီနမှေ့ာ ပရိတျသတျ ရဲ့ အားပေးမှုဟာ ရူးလောကျစရာပါ။ သူတို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလားကို လိုခငျြနကွေပွီး ဒီလို ဖွဈလာဖို့ အတှကျ ကြှနျတျောတို့ အစှမျးကုနျ လုပျနေ ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အားပေးမှုဟာ ပှဲအတှငျးမှာ အမြားကွီး အကူအညီ ဖွဈစပေါတယျ။ အရာအားလုံးကို ပရိတျသတျတှနေဲ့ အတူ ပွောငျးလဲလို့ ရပါတယျ။ ကြှနျတျော ကတော့ ပရိတျသတျ တှဟော ဒီဂိုးကို ကြှနျတေျာ့ကို ဒီဂိုး ပေးခဲ့တယျလို့ ထငျပါတယျ။ အကယျ၍ ဒါဟာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဂိုးမဟုတျလညျး သိပျပွီးတော့ အရေး မပါပါဘူး။ ကြှနျတျော ဂရုမစိုကျပါဘူး။
အရေးကွီးဆုံးကတော့ အနိုငျ ၃ မှတျ ရဖို့ပါ။ ကြှနျတျောတို့ ပွီးခဲ့တဲ့ ပှဲတှေ ဂိုးမသှငျး နိုငျခဲ့ ပမေယျ့လညျး ကြှနျတေျာ့လို သှငျးဂိုး ပမာဏ ကို သှငျးယူ နိုငျတဲ့ အခွား ကစားသမားတှေ ရှိနပေါတယျ။ အိုကပေါ။ ကြှနျတေျာ့ အနနေဲ့ အသငျး အတှကျပဲ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား ရအောငျ ကစားပေးခငျြ ပါတယျ။ ဒါဟာ ကြှနျတေျာ့ အတှကျ အရေးကွီးဆုံး အရာ ဖွဈပါတယျ။” လို့ ပွောသှားပါတယျ။
ပှဲအပွီး သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲ မှာ က​လော့က “ပှဲအပွီးမှာ ကြှနျ​​တျော ​ကောငျ​​လေး​တှကေို ​ပွောခဲ့ပါတယျ​။ ​ဘောလုံးပှဲ တဈ​ပှဲကို အနိုငျ​ရရှိဖျို့​အတှကျ​ နညျးလမျး ၅၀၀ ​လောကျ​ ရှိတယျ​ လို့ပါ။ ဒီ​နဟေ့ာ အနညျးငယျ ရုပျ​ဆိုး နိုငျ​ပါတယျ​။
လီဗာပူး အသငျးဟာ လာမညျ့ ပှဲစဉျမှာတော့ ဆောကျသမျတနျကို အဝေးကှငျးမှာ သှားကစား ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ စီးတီး ကတော့ ကွားရကျမှာ ကာဒဈနဲ့ ကစား ရမှာ ဖွဈပွီး ဆာလား ကတော့ သူတို့ရဲ့ နိုငျပှဲ အရှိနျအဟုနျ ဆကျလကျ တညျရှိနရေမယျလို့ ဆိုသှား ပါတယျ။ ​နောကျ​ဆုံး မှာ ဘယျ​သူ ဂရုစိုကျ​​ လို့လဲ ? ဒါဟာ အ​ခွအေ​နပေါ။” လို့ ​ပွောသှားပါတယျ​။
“အခုဆိုရငျ ပှဲတိုငျးဟာ ပိုမို ခကျခဲ လာသလို ပိုပွီးလညျး ဖိအား မြားလာပါတယျ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဖလားလမျးကွောငျးပျေါမှာ ရှိနအေောငျ လုပျသှားရမှာ ဖွဈပွီး နိုငျပှဲတှေ ရဖို့ လိုအပျ ပါတယျ။ ဆောကျသမျတနျ ဟာ အမှတျတှေ လိုနပေါတယျ။ သူတို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ဆကျနခေငျြတာကွောငျ့ အသကျပေးပွီး တိုကျပှဲဝငျ သှားမှာ သခြောပါတျယ။ ကြှနျတျောတို့ ကတော့ ပှဲတိုငျးကို အနျိုငျ ကစား ရပါမယျ။” လို့ ဆာလား က ပွောခဲ့ ပါတယျ။